Madaxwayne Farmaajo oo si kulul uga hadlay Dagaalka P.land iyo Somaliland | Kalshaale
Madaxwayne Farmaajo oo si kulul uga hadlay Dagaalka P.land iyo Somaliland
May 15, 2018 - 1 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka walaac sanyahay dagaalka saaka kasoo cusboonday deegaanka Tuka-raq ee gobolka Sool, kaasoo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu ugu baaqayaa madaxda, odayaasha dhaqanka, culumaa’diinka, ururrada bulshada rayidka ah, haweenka iyo dhallinyarada in ay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaallada haatan socda.
“Waxaa nasiib darro ah in uu dhiig daato, waliba xilli loo diyaar garoobayo gudashada acmaasha bisha barakeysan ee Ramadaan,” ayuu ku yiri madaxweynaha qoraalkiisa.
“Waa in dagaalka Tuka-raq si degdeg ah oo shuruud la’aan ah lagu joojiyaa, wax walbana loo maraa dariiqa wada hadalka,” ayuu raaciyay madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu madaxweynuhu tacsi u diray ehellada iyo qaraabada dadkii ku geeriyoday Tuka-raq iyo Ceel Afweyn, wuxuuna Alle uga baryayaa inuu dhaawaca degdeg u bogsiiyo.
Madaxweeyne Farmaajo waxuu lamid yahay madaxdii hore iyo kuwa hadeer ee naabnaabka ah, ee mooday hadal munaafaqnimo ah in uu yahay siyaasad.
Ugu yaraan waxeey aheeyd in uu ka’aamuso. Laakiin cabsi uu ka qabo labadaan qabiil ee Isaaq iyo Majeerteen, iyo jileec darteed ayuu hadalkaan u dhahayaa.
Golaha shacabka ee dowladda dhexe waxuu meel mariyay sharci ah in shirkada DP world oo eey leedahay isla dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta dalka laga saaor. Madaxweeyne Farmaajo iska daa in uu saxiixo sharcigaas uu baarlamaanka taageeray’e, xataa kama uusan hadlin shirkada DP world, iyo dowladda xunta ah ee iskaleh ee Imaaraadka faragalinta eey ku heeyso dowladniimada Somaliyeed, iyo labadaan qabiil oo uu baaqa u dirrayo sida eey si toos ah hubka iyo lacagta u siiso Imaaraadka.
Marka hadalka madaxweeynaha waa doqonimo, waana been lamid ah “doorasho hal qof iyo hal cod ayaan qabaneeynaa” sidii loo dhihi jirray.
In eey labadaan qabiil ee Isaaq iyo Majeerteen is wiiqaan, oo jilcaan dowladniimada Somaliya ayeey dan ugu jirtaa.
Laakiin daanyeernimada eey u fakirayaan Somalida ayaa keentay in 28 sanno uu dagaal kasocda wadanka Somaliya. Dadka caqliga xun ayaana dheereeyay shidada kasocta Somaliya. Sida hadeer loogu ooynaya qaswadayaasha ayaa qabqablayaal dagaal oo dalka baabi’inaya eey dad ugu ooyn jirreen, una kala taageeri jirreen. Taasii waa daanyeernimo ah in eeysan waxna dhinac u dhicin.